Social Median qabsoo Oromoon gabrumaa jalaa bahuf yaroo dheeraa dhaaf Oromia kessatti itti jiru, midhaa, dararaa fi ajjechaa dhinnii Oromoo nuratti hojjachaa jiru adunyaatti saaxiluf heeddu gargaaree. Akkasumatti Social Median gummaacha qabsoo biya keesaatif Oromoon diaspora taasisaa jiru jabeessu fi qindomina akka qabuf qoodha guddaa qaba. Kanaafu diinni Oromoo enyuu? Akkammitti Oromoon disapora diina Oromooratti ciyyeefata?
Gumaachi Oromoon diaspora bilisummaaf Oromiaf gumaachu murtaawaadha. Akka namu beekutti lubbun namaa mallaqaan waan hin shalagamneef gattin isii tilmaama hin qabu waan taheef qabsoon biya keessaa kan lubbu nama baasisu yoo jannu kan diaspora moo gumaacha murtaawee qabsoo biyaatif taha.
Kanaafu Oromoon diaspora murnaan adda baasudhaan — catagorize — murna kamitu diina akka tahee laalamu qaba. Yoo Fakkesaa firraa ittisun ciyeeffanaa gumaacha qabsoo TPLFti garagalchinee — focused efforts — malee dararaan, gudeeddin dubartoota keenyarra gayaa jiru, hidhaa fi ajjeechaan Oromoo biya kessaa deemaa jiru dhaabuf gumaachi nuti goonu bakka hin gayyu. Oromoon diaspora akka Fakkesaan diina keenya tahe kan hin hubanee yoo jiraateellee kan hubatu moo heeddudha. Yaroo adda addaatti barrudhaa fi media ratti bahun Oromoon heddun hojii Fakkesaan Oromoo diaspora jiran laafisuf hojjachaa jiruraa akka of eegnu nama goorsaa jiran.
Haatahu malee hujin Fakkesaa waan babalachaa deemaa jirtuf dhima kana gadi fageenyaan xincalun barbaachisaa tahaa. Oromoo diaspora kessaa murni Fakkesaadhaan dhagayamu dandayuu murna kami?
Kanaafu caraan Jaaramaan sobaa fi oloola Fakkesaa amanee fudhaachun xiqqaadha. Murni kaan Alee dha. Alee kessa hayyuleen heedu fi median adda addaa qabsoodhaaf gumaacha heedu akka goodaa jiran ni beekkama. Murna Alee keessa namoottan walaalaan ykn beekkumsaan Facebook ratti bahanii ergaa Fakkeesaatin Oromoo diaspora diguuratti hojjachaa jiraniitu jira. Kanaafu Oromoon diaspora jirru diinni Oromoo tareeffamaan :. Erga diinni Oromoo enyyu akka tahee adda baasnee hubanee booda Oromoon diaspora jiru murti fi tarkaanfi cimtuu tahee fudhachun dirqama Orommummaa qoofa osoo hin tahin TPLF mohuudhaas.
TPLF qabsoo fixaan baha jirtu of booda deebisuf kan halkani guyyaa tataafachaa jiru tahu hubachun barbaachisaa dha. Kanafu tarkaanfin nuti akka Oromoo tokkotti fudhacu qabnu murna lameen boodaa Fakkesaa fi ergamaa Fakkesaa ratti kan ciyyeefattee tahu qaba. Kana waan taheef Fakkesaan murna Mek substitute walin waan wallitti laaqamee hojjachaa jiruuf isa adda baasun barbaachisaa taha.
Fakkesaan akki itti beekkamu dandayu 1 maqaan isaa Oromoo tahee yaroo heeddu wantoota nama digan Facebook ratti bareessa ykn dubata, 2 Facebook isaa yoo laalan suraa — photo — isaa kan dhugaa hin dhoysudhaan suraa alabaa Oromoo, gootoota Oromoo fi Qeerroo maxansa.
Heddun isaa kan bara booda banamee dha. Kana hubachudhaan Oromoon diaspora Fakkesaaratti tarkaanfi akka Oromoo tokkotti fudhachuf:. Oromoon walaalaa fi dogoogooraan ergamaa ykn afaan Fakkesaa tahee waan dhugumatti qabsaawaa jiru itti fakaatee Oromoo diaspora jidutti shorarkaa umuudhaan diina gargaaraa jirufi moo:.
Yaroo Oromoon biyyaa gootumaa fi muranoon harka duwaa TPLF dura dhaabatee loolee ammalee loolaa jiru kana keessatti TPLF karaa ergamtoota isiitin diaspora kan moohu hindandeenyee akka tokkon qoofa.
Kana waan taheef Oromoon diaspora martuu akka Oromoo tookkooti diina ykn TPLF meshaa ammayaatin — Facebookin — mana ofiitti galfanee kana yoo nuttumaan isaan Facebook keenyaraa haquuf murannee tarkaanfi fudhanee malee Oromoon diasporan fulduraaf Seenaa fi Sheenaafile hin toolu.Gidiraa fi rorroon osoo wal irraa hin citiin mootummaa Habashaa dhufee-darbun bifa walfakkaatun ummata Oromoo irratti bara rawwatamaa jira.
Sanyii Oromoo kallattiin lafa irraa duguguuf gabiromfataan meshaaleen fayyadame: 1 aangoo lolaa ammayyawe hedduminaan hidhachuu waraana Habashaa, 2 daldala garbaa, fi 3 dhukkuba daddarbaa ture. Duula badiisaa irraa ummati hafe miliyonni 5 fi dhalooti aanu ammoo seera mootummaan Habashaa tolfatee waggoota darban alkallattiin sanyii duguggaa geggessaa jiruuf saaxilaman. Mallattolee sabummaa Oromoo owaaluuf dulli wal irraa hin citiin karaa hedduun geggefama.
Mootummaan Hayile Silaase beelaa fi xiyyaara waraanaa fayyadamuun Oromoo miliyoonaa oli lafa irraa duguge. Ittuma fufuun beelaa fi waraanni bara mootummota kolonel Mangistuu fi Mallas hogganamees namoota milyoona lamaa oli lafa irraa haxaaweera.
Caamsaa bara jalqabee murni mootummaa Habashaa, kolone Abyi hogganuus, haaromsuma warra darbee ti. Fincila yookiin waraana gargaaramuudhaan sirna siyaasaa fi bulchiinsa mootummaa biyya tokko jijjiruun warraaqsa jedhamuun beekama.
Revolution is a change in the way a country is governedusually to a different political system and often using violence or war Dictionary Cambridge. Gurmaawudhaan waggoota 60 darban — diddaa fi fincilli ummati Oromoo adda durmmaan keessatti hirmaate baroota sadii walittifufinsaan warraaqsoota sadii argamsisuun mootummaa Itoophiyaa gartulee Habashaan geggefamu jijjireera.
Waan kaleessa keessa turame hiraanfachuun, amma eessa akka jiramu hubachuu nama hanqisuun boori garamitti akka deemamu dursanii beekuu nama dhabsisudhaan, gara gufulee ofi duraa bubuqisu dadhabuun galma sagantefame hanqachuu nama geessa. Kaayyoon barruu kanaa: barrulee fi argaa-dhageettii keessaa odeeffannoo maddan ragoomsachuun sochiilee FDG bara — fufinsaan deemsifaman keessaa warraaqsa walittifufinsaan marsaalee sadii dhalatan fi shirra siyaasaa Habashaan butamanii galma akeekamaniif hankaakan xiinxaluu dha.
Sirna mootummaa Habashaa kan saamiicha lafaa fi duguuginsa sanyii namaa yookin dhabamsisuu enyummaa Afaan, Aadaa, fi Seenaa sabootaa raawwachuun beekamu ofi irraa kaasuuf Oromoo fi sabooti cunqurfamoon FDG haala facawaan xummura jaarraa 19ffaa keessa jalqaban. Diddaan bara jalqabaa kun daandii sochiilee QBO saaquun akka fincilli itti fufuuf gumaachan. Sochiileen diiddaa qotee bultootaa peasant uprisings haala facaween kutaalee Walloo, Tigiraay, Gojjam, Harargee, fi Baalee keessatti baroota adda addaa geggefamaa turan.
Sochileen kun sababii qindoomina jaarmiyaa fi siyaasaa hin qabneef aangoo waraana mootummaa Habashaa injifachuuf hin milkoofine. Garuu qabsaawonni kufaniis qabsoon bilisummaa bakkoota adaa addaatti fufeera.
Ficilli kun konyaa Qobboo irraa eegaluun gara konyaalee Raayyaa, Waajiraat, fi Endertaatti baballachuudhaan bara keessa sochii Wayyaanee Tumsuu jedhamu hundesse. Sochiin FDG kunis konyaalee kaaba Oromiyaa keessaa afuur qabatamaan mootummaa gartuu Amaharaan hogganamu jalaa bilisomsee ture, garuu mootummaan Haayile Sillaasee, gargaarsa xiyyaara waraanaa mootummaa Ingilizii irraa argateen, konyaalee FDG keessatti geggefaman irratti boombii robsuudhaan ummata kuma hedduu lafa irraa duguuge.
Qabsaawoti hedduun kufaniis qabsoon inuuma ittifufe. Bara booda sochii misomaa fi siyaasaa kan jaarmiyaa Macaa fi Tulamaa, sochii aadaa Waldaa Afran Qalloo, sochii Baalee, fi fincila Barattootaan qabsoon hogganame: warraaqsa jalqabaaf daandii tottolche.
Sochiileen FDG kun qindaawaa fi guddachaa adeemuudhaan bara kessa sochiin gara sadarkaa biyyoleessaa guddachuun sirna saamicha lafaa fi daldala garbaa, kan mootii motoota Habashaan hogganamaa ture, hundee buqqiisee ijaaramuu jaarmiyaa siyaasaaf daandiin tolchamuu eegale. Warraaqsa bara argamsisuu fi qindeessuu keessatti hirmaannaan hayyoota Oromoo guddaa ture. Caasaa jaarmiyaa ummataa kan ijaaree fi diriirse hayyuu Oromoo, Dr Haayilee Fidaa, ture.
Sadarkaa biyyolessaa irraa hanga ganda qotee-bulaatti ijaaramuu fi diriirfamuu waajjira dhimma jaarmiyaa ummataa WDhJU keessatti qoodi hayyoota Oromoo guddaa ture. Garuu murni Darguu koree loltuu bulchiinsa yeroo gutummaatti WDhJU dhuunfachuun jaarmiyoota siyaasaa bara sana ijaaraman hunda diigee jaarmiyaa siyaasaa tokkicha aangoome hundeessu saganteesse.
Darguun aangoo waraanaa fayyadamuun jaarmiyootaa fi ummata irratti lolli labse, gara sochii FDG kan warraaqsa 2ffaa argamsisutti ceesifame.
SABBOONUMMAA LAMMAA MAGARSAA FI HOLOLA ISAA : GUCA QABSOO OROMOO
Mootummaan Darguu aangoo meeshaa waraanaa keessaa maddu fayyadamee warraaqsa jalqabaa gara dabarse. Sochii warraaqsa bara keessatti gaaffileen siyaasaa gaafataman: 1ffaa lafti qotee bulaaf haa deebiyu fi 2ffaa mirgi hiree murteeffannaa ummatootaa haa dhugomuu turan.
Gaaffiileen siyaasaa kun lamaan kallattiin mirga sabummaa fi abbaa-biyyummaatti hidhamoo dha. Garuu mootummaan Habashaa gartuu Darguun durfamu gaaffilee gurguddoo kana lamaan gara dabarsuudhaan gaaffii qabsoo gitaatti jijjiiree impaayera Habashaa tiksuu saganteefate.
Goyyomsaa siyaasaa kana irratti gurmuun qabsaawotaa dammaqan sochii FDG eegalan.Message from the Web-editor:-This web page is created and maintained by an ordinary Oromo who had to run away from his homeland for a simple reason of upholding and exercising his basic human rights and the right of the Oromo people who have been subjugated by successive Ethiopian regimes for over hundred years.
I would like visitors to share their opinion and relevant news items to the editor at:oluma5 yahoo. Walgahiin GS-ABO kun haala qabsoon hilisummaa Oromoo keessa jiru, roorroo mootummaan Wayyaanee ummata Oromoo irratti geessisaa jiru, haala jeequmsa adda addaa naannawa Gaanfa Afriikaa keessatti yeroo ammaan kanaa irrattii fi haala idila-adunyaa gadi fageenyaan erga xiinxalee booda qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuuf murtiilee jajjaboo dabarsee jira.
Kanaaf jecha, dhaabicha dagaagsuun haala irratti xiyyeeffachuu qabau kessaa olaantulmaa qaba jenna.
Qabsoon tokkao kan dagaaguu danda'u fi akeekni isaa kan galma ga'uu danda'u kaayyoo, tarsiimoo fi tooftaan hordofamu xaliiluun murteessaa akka fa'e beekama. Seenaa gabrummaa,kan hawaasni keenya keessa dabre ammaas keessa jiruu waliin yoo ilaalle bakki amma gahe kun madaala kamiin iyyuu injiffannuo xiqqaa miti. Haa ta' u malee waggoota dhiyoo as maqaa dbaaba kanaa kanneen himatan adda addaa kaayyoo kana haguuguuf tattaaffin isaan godhan hin miilkaawin malee hojii dhaabichaa irratti danqaraa ta'u danda'ee jira.
Dhaabni bilisummaaf warraaqu tokkoo dursee kan mirkaneeffachuu qabu walabummaa mataa isaa akka ta'e walgahichi irra deebi'ee yaadatuun walabummaa ABO tiksuu fi miidhaa alagaan harka lafa jalaan dhaabichaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo irran ga' uuf carraaquu iggituu irratti hajjetamuu akka qabu murteesse. Sabboontota Oromoo Ilaalchisee Jeequmsa ABO keessatti dhalate irraa kan ka'e miseensotnii fi deggertoonni dhaabichaa kan qabsoo irraa of qusatan martinuu egereen ummata Orumoo mirkanaawuu kan danda'u dhaaba jabaa fi kaayyoo ititaa jalattii gurmaawuun qofa akka ta'e hubatuun ABO deebisanii dagaagsuu irratti akka hirmaatan waamicha jaallummaa goonaaf.
Ummata Oronmo Ilaalchisee Qabsoo ummatiii keenya bilisummaa isaa gonfachuuf geggeessaa jiru kan abdii namatti bulchu akka ta'e mirkanaawuun wal nama hin gaafachiisu. Walgahi GS-ABO wareegama ummatni keenya baasaa ture ammaas itti jiru, bilchinaa fi dammaqiinsa ummatni keenya argisiseef kabajaa guddaa akka qabu ibsa. Humnoonni siyaasaa tokkummaa Itoophiyaa tiksuu irraa dhimma qaban harka sadaffaatti gargaaramuudhaan ummata Oromoo biyya amba keessa bakka adda addaa jiraatu gidduu seenuun tokkuummaa isaa akka jeeqamu tattaaffii wal irraa hin cinnee oofaa jiraachuu walgahichi hubatee jira.
THBO akka humna tokkummaatti yoo fudhanne, jaarmayaa qabsoon Oromoo haala amma irra gahe irraa fuudhee, gurmuu tokkummaa Oromootaa caalaatti magarsee, galii isaan kan gahu jechuu keenya. Humna bilsummaa Oromoo itichuudhaan, dammaqiisa ummatichaa, humna jaarmayaa, kan siyaasaa fi hidhannoo taasisee,jijjiirama dhugaa kanfidu, jaarmayaa tokkummaa homnoota bilisummaa Oromiyaa jabeessee gamtaan kan hiriirsu jechuu keenya. Jaarmiyaa injifannoolee keenya kan dabran utubee, dadhabbiilee keenya kan darban haqee, dogoggora keenya foyyessee, itti fufa qabsichaa mirkaneessu jechuu keenya.
Mootummaa Wayyaanee Ilaalchisee Mootummaan Wayyaanee kun ummata Oromoo lafa irraa duguuguu imaammata dhaabbataa godhatee erga itti bobba'e bubbuluu isaa walgahichi hubatee jira. Humna diina hamaa akkanaa of irraa deebisanii of dandamachiisuun kan danda'amu qabsoo hidhannoon of irraa faccisuu qofa. Kanaaf jecha, qabsoo of ittisuuf ummatni keenya gochaa jiru mirkaneessuuf sochiin Waraana Bilisummaa Oromoo WBO yoom iyyuu caalaa dandeettii fi ayinaan irroomsuu fi dagaagsuu irratti akka xiyyeeffatu walgahiin GS-ABO murteessee jira.
Ilamaan Habasha walii isaanii gidduutti aangoo irratti wal-haadhaban malee, ummata Oromoo kiyyoo kolonii isaanii jala tursifachuuf akeeka tokkicha qabu. Ilmaan nafxanyootaa aangoo bar a dheeraa harka isaanii ture,Tigirootaan harkaa fudhatame deebifatanii aangoo irratti deebi'anii sirna Impaayerummaa biyyichaa akka duriitti tursuuf dharra'aa. Murni kun dur irraa kaasee tarkaanfii seenaa of duuba deebisuuf tattaafata. Mirga hiree murteeffannaa ummatootaa akka biyya diiguutti fudhatee dura dhaabbata.
Kanaaf, bum-wohin aangoo harkaa buute deebifachuun sirna impayerummaa biyyichaa tursiifachuuf dharra'anii fi kan mirga hiree murteeffannaa ummatootaa dura dhaabbatan diina qabsoo bilisummaa Oromoo ti. Harr'as hojiin kun itti fufee argina.Post a Comment. Monday, April 11, bareefama. Abdii Boruutiin. Kuni ammoo Oromoo dhaaf waan haaraa miti; qabsoo bilisummaa isaarraa duubatti isa deebisees hin beeku. Uummata hidhuu, dararuu, ajjeesuu fi biyyarraa baqachiisuun mallattoo gabroonfataa ti.
Filannoon tokkohojii balleessaa fi seenaa xureessaa kana itti fufanii; duula balleessanii baduu dalaganii; yoo Wayyaaneen kufte isaanis gooftolee isaanii wajjin kufuu dha. Kuni ammoo, kufanii hafuu qofaa otuu hin taane, seenaa badaa barreessanii dabruu dha. Wayyaaneetti garagalanii kufaatii ishii daddafsiisuu jechuu dha. Dargaggootni keenya, Oromummaa fi sabboonummaan isaanii hammam akka guddatan artistoota, weellistoota fi barattoota keenya akka fakkeenyaatitti ilaaluu ni dandeenya.
Bakkee Wayyaanee faashistii dhiiga-xuuxaan jirutti, soda takka malee sirboota tokkummaa cimsan; jagnoota faarsan; Oromummaa guddisani fi qabsoof kakaasan weellisaa jiru. Barattootni Oromoos hamma qabsoo hadhaawaa godhaa, hidhamaa fi ajjeefamaa akka jiran kanuma arginu fi dhageenyu dha. Walumaagalatti, uummatni keenya, otuu qawwee Wayyaaneetiin ukkaamamee jiruu, hammam akka of baraa fi dammaqaa deeman hubachuun nama hin rakkisu jechuu dha.
Cancala gabrummaa kukkutee; hamma bilisummaa fi abbaabiyyummaa isaa deebisee argatutti qabsoon isaas hin dhaabbatu. Uummatni, bar-dhibbee tokkoo ol gabrummaa jala jiru; kan hidhaan, darara fi ajjeechaan akkasumas saamichi qabeenya isaa dabaree dabaree dhaan irra gahaa jiru, kana booda wanta sodaatu hin qabu.
Yoo mooraan keenya jabaate fi humna abdachiisaan humni sagalee tokko dhageessisu uumame booda, tumsa alaa barbaaduu fi humnoota biroo wajjin hojjechuun nama hin sodaachisu jechuu kooti. Kanarratti yaadni, ilaalchi fi ijjannoon kiyya hin jijjiiramne.
Wanti dagatamuu hin qabne fi hunduu hubachuu qaban, yoo Wayyaaneen daftee kufuu baatte, kan biraa hafee; biyyi ijaarrachuuf hawwinu tun, Oromiyaan akka gurguramtee dhumaa deemtu fi booda biyya keessatti dhalannee guddanne tanaa akka hin dhabne dha. Waayee kana Oromootni hunduu hubachuu qabu. Biyya teenya dhabuu yoon jedhuu, gurguramtee dhumuu ishii qofaa otuu hin taane, kan gurguramuurraa haftellee summii dhaan baddee; biyya bareedduu fi dureettiin tun bifa biraatiin akka hin argamne jechuu kooti.
Kanaaf, kufaatiin Wayyaanee, uummata keenya gabrummaa hamaa kana keessaa baasuu qofaa otuu hin taane, biyya teenya Oromiyaas badiirraa hanbisa jechuu dha.
Dhumarratti, otuu barruu kiyya hin xumurin dura, carraa kanaan, dhaamsa kanaa gadii kana dabarsuun barbaada:. Seenaa xureessitee barreessaa jirtu kanallee sirreessuuf carraa argatta. Kanaaf, uummata Oromoo wajjin dhaabbadhu! Diina kufuun isaa hin oolle wajjin hin kufin! Hammasitti qabsoo kee itti fufuu qabda. Injifatnoon xumuraa kan keeti. Yeroon dirqama kana hubatani fi hojiirra oolchanis amma. Kufaatiin Wayyaanee dursa priority argachuu qaba; kanarratti haal-dureen waan jiru natti hin fakkaatu.
No comments:. Newer Post Older Post Home. Subscribe to: Post Comments Atom.Diyaaspooraawwan iddoolee waraanaan miidhaman daawwachuuf Samaraa galan. Koreen dhaabbii dhimmaa misooma baadiiyaa Caffee Oromiyaa aanaa Kofaleetii hojii…. Leave A Reply Cancel Reply. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Diyaaspooraawwan iddoolee waraanaan miidhaman daawwachuuf…. Komishinar Lalisee Namee Ityoophiyaatti Ambaasaaddara…. Imaammanni rakkoolee gabaa beelladoota dhaabbii furuuf….
Fana: At a Speed of Life! Obbo shimallis haala yeroo ilaachisuun ibsa laataniiru. Ummanni biyyattii walqixxummaa, demookraasii fi fayyadamummaa haqa qabeessaaf waliin qabsoo hadhaawaa gaggeessaa turaniiru, ammas waliin imalaa jiru jedhan obbo Shimallis ibsa isaaniin. Qabsoon ummataa kun lafa akka hin qabne qaamoleen badii gochaa farra ummataa raawwachuu itti fufuu isaanii eeraniiru. Gareen haalaan miidhame kun abdii kutachuun ummata nagaa, qonnaan bultootaa fi hoggantootarratti gochaa shororkeessummaa raawwachaa jiraachuu obbo Shimallis eeraniiru.
Guyyaa kaleessaa godina Wallaga Lixaa aanaa Gullisoo ganda gaawwaa Gaanqaatti ummata nagaarratti miidhaa hammaataa qaqqabsiisuu ibsaniiru. Akka mootummaatti wareegama barbaachisu kamiiyyuu kanfaluun tokkummaa ummataa fi Ityoophiyaa itti fufsiisuuf xiyyeeffannoon ni hojjetama jedhan.
You might also like. Oduu biyya keessaa.
Prev Next. Leave A Reply. More Stories. Jan 2, Prev Next 1 of 3,Kabajamaa Ummata Oromoo, mirgi kee sarbamuun alagaan roorrifamuu irraa jireenya hadhaawaa gaggeessuuf dirqamte.
Waraana Bilisummaa Oromoo diina kuffisaa kufaa jirtu. Qeerroo Bilisummaa Oromoo, diina dhala namaaf naasuu hin qabne irratti finciluun mirga ummata keessaniif falmaa irratti argamtan. Akkasumas deggertootaa fi firoottan QBO. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo harqoota gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatu, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfachiisamee kabajamuun mirgi ummatootaa itti mirkaneeffamu akka tahu hawwina.
Maqootnii sirnaa hawwatoo moggaafatanis summii dammaan makame, waaroo akeeka qaban ittiin golgatan tahuu irra dabree ummatoota fayyaduu hin dandeenye. Kana irraas, Oromoo lafa isaa irraa buqqaasuun kan badhaadhaa jiran alagoota maqaa investmentiin alaa dhufanii fi Wayyaanota aangoo humnaan dhuunfatani dha. Oromiyaan bakka Abbaan biyyaa itti hagabuu fi hiyyoomu alagaan ammoo keessatti duroomu taateetti.
Qaroo fi hubataa, beekaa fi dammaqaa keessaa filanii ajjeesuu fi hidhuun, tarkaanfii Wayyaanee ummata Oromoo qor-qalbii isaa cabsuun, hogganaa fi hayyuu dhabsiisuun bittaa isaa turfatuuf fudhataa jiru dha.
Kanneen hawaasa biratti fudhatama qaban hidhaa fi doorsisaan jireenya dhorkatuunis tarkaanfii diinaa beekamaa taheera. Baratanii hojii dhorkatamuun ykn hojii gadi aanaa hojjatuuf dirqamuun hiree dargaggoo Oromoo taasifameera. Qeerroon Oromoo adda durummaa fi murannoon falmaa waggoota kudhanii oliif addatti ammoo waggoota lameen as aanan keessa adeemsiseen ummata isaatti abdii horeera. Miseensotni dhaabaa hundi, deggertootnii fi ummatni Oromoo marti sochii ilmaan isaa itti jiran kana beekee waliin akka hiriiru ABOn hiree kanaan dabalataan yaadachiisa.
ABO fi WBO dhabamsiisuuf duulli waraanaa fi diplomaasii wal irraa hin citne waggoota dheeraaf irratti adeemsifamaa jira. Kan irratti duulamuufis Kaayyoon haqaa deggersa ummata Oromoo qabu kun akka hin milkoofne taasisuuf jecha. Milkii kana argamsiisuu keessattis qoodni ummata keenyaa biyya keessaa fi alaa, akkasumas miseensotaa fi deggertootaa olaanaa waan taheef ABOn galata dhiheessaaf.
Waggaa dabre keessa ummatni keenya harqoota gabrummaa jalaa of baasuuf tarkaanfiin fudhataa ture kan qabsaawotaa fi firrootan qabsoo gammachiise, diina ummata Oromoo hamilee cabsee fi mataa gadi qabachiise dha. Hundaan olitti ammoo bilisummaan wareegamaan alatti hin dhuftu! Firaa fi diina adda baafatee bilchinaan tarkaanfiin fudhataa tureen shira diinaa fashalseera.
Kabajaa qabaaf. Qabsoo bilisummaa wareegni qalii itti bahaa jiru kanas caalaatti finiinsuun bakkaan gahuuf kaayyoo keenya irratti cichinee daran dachaa dachaa haa warraaqnu jedha. Tarkaanfii diinni fudhatuun osoo hin rifanne waliin hiriiruun haa qabsoofnu. Mootummaan Waayyaanee Master plan kaafame jechaa ture harka lafa jalaan hojii irra oolchuuf karoorfateera. Kanaaf gochaa diinaa Oromummaa balleessuu irratti xiyyeeffate kana hubbatnee gurmuu keenya caalaatti jabeeffatuun qabsoo finiinsuun dura haa dhaabbannu.
Lammiilee mirga ifii fi ummata isaaniif dubbatuu fi falmuu irraa diinni irratti roorrisaa jiru kanneeniif ABOn kabajaa qabaaf. Mootummaan Wayyaanee kana hunda kan raawwataa turee frequency meter for generator jiru ummatni Oromoo mootummaa isaa jala hiriiruu diduu irraa ti. Ummatni keenya alaas sochii kana daran jabeessuuf kan duraanii caalatti waan qabu maraan akka waliin dhaabbatuu waamicha lammummaa dhiheessinaaf.
Mootummaa Wayyaane kan jiraataa jiru gargaarsa mootummoota gara garaa irraa argatuun malee deggersaa fi fedhii ummatootaan akka hin taane ifaa dha. Maddi galii fi jireenyaa kun akka gogu ykn qooru gochuun ammoo dirqama miseensotaa fi kan nagaa jaallattootaa ti. Kana waliin rakkoo baqattummaa lammiilee mudataa jiruuf sababni rakkoo siyaasaa bittoota Itophiyaan uumame tahuu beeksisuu fi miidhaa gosa adda addaa baqataa Ormoo irra gahaa jiru dhageesisuu irratti akka hojjatan hubachiisa.
Murtiilee dabran hojiitti hiikuuf kan gargaaran dirqamaa fi qajeelfamoota adda addaa KHR-ABOf kennuudhaanis wal gahii isaa milkii fi injifannoodhaan xumurate. Kanneen keessaa dhimmi Kora Sabaa jabinaa fi shaffisaan irratti hojjetamee akka xumuramu wal gahiin 23rd jump street kun qajeelchee jira.
Walgahiin GS ABO kun sochii boonsaa fi seena-qabeessa karooraa fi qindoomina diriire ofitti fudhatuun Ummatni keenya itti jiru kana gadi faginaan xiinxale. Adeemsa xaxamaa diinotiin saba Oromoo ABO fuuldura afan hunda injifatuun yeroo irraa yerootti if jabeessaa fi if humneessaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa gulantaa itti aanutti tarkaanfachiisaa turee fi itti jirutti, sirna isaa hordofuun Kora Sabaa godhachuun daran akka of gurmeessuu fi cimsu wal gahiin GS-ABO tartiiba ittiin xumuramu murteessee jira.
Baroota as aanan kana yaaliin gama kanaan godhamu jajjabeessaa tahuu GS hubatee jira.Lataa Damee December 8, Comment. Oromiyaa Damee Oromo.
ABO mil. Thank you Alemu for another amazing song and allowing me to share it with my subscribers. Damee Raadiyolojii Beeysisa Qoranno Altrasaawindi Meesha Garaa waan akka kalee, tiruu, rajijii,hadhooftuu fi macaroo keessaa. Waajjira damee keenya daawwachuu warri barbaadan akka dhufan afeeramaniiru. Haaluma kanaan Liqii bittaa Maashineeriifi Pirojektoota deeggaruu fooyyessuuf dhaabbileen faayinaansii haala akka mijeessaniif ni hojjetama jedhanii jiru.
Afaan Oromoo qubee qabaachisuuf tattaafachuun isaa akeeka qaba. Gosti Karrayyu damee gurguddaa Baasoofi Dullachatti qodama. Borumtaa isaa barfadheen dhufe. Pirezidaantiin itti aanaa Akkadaamii Yuunivarsiitichaa dooktar Malkaa Hiikaa Tajaajila Oduu Itoophiyaatti akka himanitti, baratoota barnoota isaanii yeroo idilee fi kanneen biroon sadarkaa digirii jalqabaafi digirii sadaffaan barachaa turan … Urbanization,Decentralization and urban Linkage manager.
Tarbaayinoonni Hidha Haaromsaa 2 baatiwwan jalqabaa waggaa haaraatti humni… Sifen Megersa Sep 9, Tigree jalaa baatee Amaaraa jala galuuf wixiffachaa jirti. The sixth day of the week in many religious traditions, and the fifth day of the week in systems using the ISO norm; the Biblical sixth day of a week, the day before the Sabbath, or "day of preparation" in preparation for the Sabbath; the Islamic sabbath; it follows Thursday and precedes Saturday.
Faya Dayiin badhaasa Oskaar 94ffaa damee … Akkam jirtuu Qophesitota damee hortee ilmaan Oromoo baga jirtan jechaa seenaa ani oromoo dhunfaa ykn mangudoo oromoo tokko irraa baradheef seenaa akkata hortee ilmaan Oromoo isiin asirraati barreessitan wal dhabbaa kanafu yoo dogongorii kara koo. Dameen qorannoo Oromoo pirojeektiiwwan Biiroon Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa calqabsiise akka itti fufu taasiseera.
They worshipped one Supreme Being. Dubbima olii kanaafillee mammaaksa qaba - mammaaksi dubbii fidaa, dubbii fixaas. Milishoonni kunneen dhimmoota heera mootummaa, dambii fi qajeelfama milishaaimaamma Finfinnee, Muddee 24, FBC — Mariin paanaalii hayyootaa fi qooda fuudhattoota damee qonnaa hirmaachise magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffamera.
October 27, Hojiin waajjira damee Dhugaa Baatota Yihowaa keessatti hojjetaman hundinuu hojii lallabaa deggeruu. Siddisee dha. I've made a repository of Oromo music lyrics in the hopes that it will help Oromo youth in the diaspora or any other Afaan Oromo learner appreciate the content and beauty of … Jecha Walaloo "Jecha walaloo" is Afaan Oromo for 'words of song'.
Zalaalam sagalee bara Akka Abdii Hassan Husseen, daayrektariin basaastuu Puntilaandi duuraanii jedhutti deggartoonni Aysiis Somaaliiyaatti damee qabaachuun han beekame bara darbe, Onkoloolessaa keessa. Post navigation. Gaazeexotni Oromoo fi waldaan aadaa Oromoo dhaa akka cufaman godhee jira. Yaadaan osoo isin hin fageessin mee qajeelumatti gara muudannoo koo isin haa fiduu. Damee Boruutiin, Ebla 27, Mallattoo Hawaasaa.
Damee hortee oromoo pdf. Damee Misooma Teeknoloojii 1. Wanni tolfameef meeshaa garaa keessa laaluf. Gabaasa, Ibsa, Information September 20, Diyaaspooraa eergamtootaa diina Oromoo. amanttii tokko kessaa yaa'an wayyaanee caala maaliifi ABO jibbanii Shaneen diina keenya jedhuu? Waaqin Oromoo diina balleessa Itophiyaan jaannaba Oromoon itti hidhamee ajjeefamee awwalamudha. Barabaran jaannaba keessatti kan hidhu. Kun diina cvnn.eun har'a malee hin ta'u?bor guyyaan hin jiruu?
३ महिना प्रतिवेदन गर्नुहोस्. OMN wan cvnn.eu qabsoo iraa. likes. yes we can now time is up that just Akkuma bekamutti yeron amma kessaa jiru See more Eritrea: Fira mo Diina? Kanaafu Oromoon diaspora murnaan adda baasudhaan – catagorize – murna kamitu diina akka tahee laalamu qaba.
Oromoon diaspora – kan wan qabsoo. Kana waliin itti fufiinsa qabsoo bilisummaa Oromoo iggiteessuu keessatti WBOn qooda mul'ataa gumaachuu ummata keenyaa fi diina jalaa. Hundee dheeressaa yookiin maqaa qabsoo Diinaraas jedhamuun beekama.
Hooggantoota Waraana Bilisummaa Oromoo keessaa kan karaa nagaan. Qabsoo Oromoo yeroo dheeraaf gaggeeffamaa jirutti xumura gochuu hanqachuun waamicha Biyya kessaa fi alaa isaaniif dhihaateef deebii laachuu eegaluu. Qabsoo Oromoo irratti diina ta'uu isaa ibsuuf, "nuti ABO/Shane ummata dhiganis ta'e yaadaan kan of kessaa hinqabne ta'anii mul'atu.
Happened in Adama, Oromia – February 14, Seensa. Ummati Oromoo mootummaa-maleeyyi ta'uudhaan walabummaa sarbamee, aangoo ittiin diina. Jaarmayaa walabi kun immoo kan diina cininee madeessuu danda'u ta'uu qaba. Ummata dammaqee, of bare, of ijaare du'a hin sodanne kan qabsoo iraa deebisu. Siyaasa gantummaa fi gartummaa to`achuun tokkummaa moraa qabsoo siyaasi gartummaa amantaa moraa QBO kessaa dhalachuu mirkaneessa. Gochaan isaa kunis Artist Usumaayyoon yoomiyyuu qabsoo kana irraa boodatteetti waan isaan jadhan kessaa hanga tokko haa walin caqafnnu.
Qabsoo Oromoo irratti diina ta'uu isaa ibsuuf, "nuti ABO/Shanee ummata bilisummaa Oromoo biqilche kessaa meeqa saanitu qaanii malee akka. Kana keessatti kan akka waliin hojeetu kan waliin ramadame kessaa of uuman ta'u irra darbanii diina balaaleffachuu irratti hojii qabatamaa qabsoo Oromoo. Qabsoo boqonnaa kana keessatti demsifameen: kan mirga hiree murteeffannaa ummatootaa dura dhaabbatan diina qabsoo bilisummaa Oromoo ti.
Eejjannoon kun firaafis diinaafis cvnn.eu Qabsaa'aan tokko guyyaa qabsoo kanatti seenee kaasee kan itti himamuu fi haalaan hubatee itti. Qabsoon Oromoo hanga bara tti diina dandamachuu fi diinarraa aanuuf Kaleessa diinni hidhaa fi ajjeechaan qabsoo keenya ukkaamsuuf. Duree qabsoo ilmaan Oromootaa Hundee fi burqaa gootootaa Madda beeytootaa fi Jaalaalan sii jaaluu kessaa baqeessen sii kayaa silaa onnee too kessaa.
Diina QBO sirni kolonii fi namoonni kolonii gageessan ykn tiksan diina qabsoo oromiyaati. 5. oromiyaan biyya impaayera Itophiyaa kessaa bakka.
Erode item number list
Wpf directed graph control
Teer today hit number